Nhau, 01 Gumiguru 2013
Chipiri 1 Gumiguru 2013
Imwe ongororo yakaitwa munyika dzemu Africa makumi matatu neina inoratidza kuti hurumende yemubatanidzwa muZimbabwe yakabatsira zvikuru mukudzikisa hurombo munyika.
Hupenyu hweboka reJOMIC hwazosvika kumagumo zvichitevera danho rakatanga kutorwa nevamwe vashandi vesangano iri rekudzosera motokari nemimwe midziyo zveboka iri zvavanga vachishandisa kumuzinda weJOMIC uri kuAvondale muHarare
Gunyana 30, 2013
Zimbabwe Yoita Hurukuro neIMF neWorld Bank paNyaya yeGwara reHupfumi
Sangano reInternational Monetary Fund pamwe neWorld Bank ari kutanga mumazuva mashoma anotevera kuita misangano nehurumende yeZimbabwe itsva panyaya yegwara rehupfumi.
Mashoko aVaMugabe kuUnited Nations Okonzera Mutauro muNyika
Mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vakasimuka muNew York neChishanu vachidzokera kumusha mushure memusangano weUnited Nations General Assembly.
Caps United inoti iri kupikisa chirango chayakatongerwa nesangano rePremier Soccer League chekuti ibhadhare mari nekuti vatsigiri vayo vakaita mhirizhonga pamutambo wayo neDynamos mavhiki matatu apfuura.
Munyori mubazi rezvehupfumi VaWillard Manungo vanoti hurumende iri mushishi kuyedza kuumba homwe yemari kana kuti Sovereign Wealth Fund kubva mukutengesa zviwanikwa zvenyika.
Kupiwa mutongo kwevarume vatatu neChitatu nedare ramejastiriti muHwange mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuvhima zviri kunze kwemutemo, uye kuuraya nzou nedzimwewo mhuka nemuchetura wecyanide, kuri kutambirwa nevakawanda sechiitiko chinogona kumisa nyaya dzekuvhima zvisina mvumo.
Dynamos Inoti Ine Magwaro Anodiwa neCAF Kuti Itambe muMakwikwi eSangano Iri
Sachigaro vechikwata che Dynamos va Kenny Mubaiwa vanoti chikwata chavo chine magwaro ese anodiwa nesangano re Confederation of African Football (CAF) iro rakapa chisungo chekuti richamisa zvikwata zvemuZimbabwe zvisina mangwaro akakwana mukutamba mumakwikwi eCAF Champions League neConfederation Cup.
VaMugabe Voshora Vekunze neNyaya yeZvirango kuUN
Mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe neChina vakashora zvikuru nyika dzakabudirira nekutemera nyika yeZimbabwe zvirango.
MDC Yoramba Kuzeya Mashoko Akaturwa naVaMugabe kuDare reParamende
Nhengo dzedare reparamende dzeMDC-T dzave nemazuva maviri kutanga neChipiri dzichiramba kuzeya mashoko akaturwa nemutungamiri wenyika VaRobert Mugabe kudare iri neChipiri svondo rapaera pavairivhura zviri pamutemo.
Vamiriri vemasangano evashandi vehurumende vasvitsa gwaro retarisiro yavo munyaya dzemihoro kuhofisi yegurukota idzwa rinoona nezvevashandi VaNicholas Goche